လူတိုင်းမြင်တွေ့ဖို့ ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဥဩငှက်တွေရဲ့ တွန်သံဟာ ဘာကြောင့် နွေရာသီမှာမှ ကြားရတာလဲ?
Win MM Htay 12 Mar, 2021
“ ပိတောက်က နွေရဲ့ ဇာတ်လိုက် “ ဆိုရင် “ ဥဩငှက်ဟာ နွေရဲ့ ဇာတ်ပို့ “ လို့ အများက ဆိုကြပါတယ်။ ဥဩငှက်ရဲ့ တွန်သံကို လူတိုင်းလိုလို ကြားဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မြင်ဖူးကြတဲ့ သူတွေကတော့ လူနည်းစုပဲ ရှိမယ် ထင်ပါတယ်။
အကြောင်းအရင်းကတော့ ဥဩငှက်ဟာ သစ်ပင်အမြင့်ကြီးတွေရဲ့ အရွက်တွေကြားမှာ ခိုအောင်းနေလေ့ ရှိတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နွေရာသီမှာမှ တွန်သံကို ကြားရပြီး ကျန်တဲ့ရာသီတွေဆို ကြားရလေ့ မရှိတဲ့အသံဟာ ဥဩငှက်သံပါ။
ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် ဥဩငှက်တွေက နွေရာသီမှာမှ အသံကြားရတာလဲ?
ဥဩငှက်ဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တစ်နေ့လုံး တွန်ကြူးနေတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်‌လေ ညဉ့်နက်တဲ့အထိ အသံကြားနေရတတ်ပါတယ်။ တွန်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ မိတ်လိုက်နေတာမို့လို့ပါ။ ဥဩငှက်တွေဟာ မိတ်လိုက်တဲ့အချိန် တစ်ခုထဲမှာသာ တွန်မြည်လေ့ရှိပြီး တစ်ခြားအချိန်တွေမှာ အလွန်တိတ်ဆိတ်တဲ့ ငှက်ပါ။
ဥဩငှက်တွေဟာ ကျီးကန်းတွေရှိတဲ့အရပ်မှာ နေလေ့ရှိတဲ့ သတ္တဝါလို့ ယူဆရပါတယ်။ နယ်မြေကျူးတတ်တဲ့ ဥဩငှက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဥတွေကို ကျီးကန်းတွေရဲ့ အသိုက်မှာပဲ ဥချထားတတ်ပါတယ်တဲ့။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ (၂)ဥ (၃)ဥ တွေ့ရတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ (၈)ဥလောက်အထိ ဥထားတတ်ပါတယ်။
ဥဟာ များသောအားဖြင့် စိမ်းပြာရောင်ရှိပြီး ဥပေါက်တဲ့အခါ ဥဩငှက်ပေါက်လေးဟာ အသိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ တစ်ခြားငှက်ဥတွေကို သစ်ပင်အောက်ကို ပစ်ချလေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ကျွေးသမျှ အစာရေစာတွေကို တစ်ကောင်ထဲစားသောက်ပြီး တစ်ခြားသော ငှက်ပေါက်တွေထက် အကောင်ထွားလာပါတယ်။
လူတစ်ချို့ကတော့ နွေရာသီအတွင်း ဥဩငှက် မကြာခဏ တွန်လာတဲ့အခါ မိုးရွာတတ်တယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ ဥဩငှက်တွေဟာ တစ်ခြားငှက်တွေ စားလေ့မရှိတဲ့ အမွှေးထူထူ ခူကောင်များကိုသာ စားသုံးပြီး အသက်ရှင်သန် ကြီးထွားကြပါတယ်တဲ့။
ဥဩငှက်တွေဟာ ဒေသတစ်ခုကနေ တစ်ခုကို အမြဲတမ်း ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်တတ်ကြတယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကျက်စားရာ နေရာတွေဟာ ရာသီအလိုက် ပြောင်းလဲနေတာကြောင့် နေရာတစ်ခုထဲမှာပဲ အမြဲတွေ့ရဖို့လည်း ခဲယဉ်းလှပါတယ်။
တနင်္သာရီတိုင်းရဲ့ မတ်လကနေ ဇူလိုင်လအတွင်းဟာ ဥဩငှက်တွေကို ပေါပေါများများ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ကာလဖြစ်ပြီးတော့ ဩဂုတ်လကနေ နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာတော့ လုံးဝမတွေ့ရတော့ပါဘူးတဲ့။ ဒီဇင်ဘာလကနေ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာတော့ ဥဩငှက် အနည်းငယ်ကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဥဩငှက်တွေဟာ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ကျက်စားတတ်တဲ့ သတ္တဝါတွေ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သိပ္ပံပညာရှင်များကတော့ ဥဩဆိုတဲ့အမည်ဟာ ဥရောပတိုက်ရှိ လူသိများတဲ့ ငှက်မျိုးစိတ်အချို့ရဲ့ အော်သံကို အစွဲပြုခေါ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဥဩငှက်ရဲ့ အရှည်ဟာ (၁၇) လက်မရှိပြီး မျက်စိက ကြက်သွေးရောင် ဖြစ်တာကြောင့် လှပပြီး သာမန်ငှက်တွေထက် ထူးခြားပါတယ်။ ဥဩငှက်တွေ လေထဲပျံတဲ့အခါ အမြီးရှည်ကြီးတွေနဲ့ တိုပြီးဝိုင်းတဲ့ အတောင်များကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။